Online Nepali News, Himali News, Himali sandesh, latest News
काठमाडौंमा वर्षकै बढी चिसो महसुस, सर्दीबाट बच्न डा. उप्रेतीको यस्तो सल्लाह
काठमाडौं, २० पुस– काठमाडौंमा बिहीवार यस वषकै सबै भन्दा बढी चिसो महसुश गरिएको छ ।
काठमाडौँको आजको न्यूनतम तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीसेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव २ डिग्रीसेल्सियस थियो । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर चिसो बढेको मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिइन । उनका अनुसार चिसो अझै बढ्ने छ ।
जाडोको समयमा विषेश त बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरु बढी जोखिममा पर्छन् । जाडोको समयमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भइएन भने स्वास्थ्यमा समस्या मात्रै देखिदैन मानिसको ज्यानै जान सक्छ । त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन चित्सिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
जाडोको समयमा स्वास्थ्यमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेतीले बताइन् । उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘जाडो मौसममा रुघा लाग्ने, छाती दुख्ने, बालबालिकामा निमोनिया हुने र सुत्केरी महिला तथा वृद्धवृद्धामा विभिन्न्न समस्या देखिन्छ । ’
डा. उप्रेतीका अनुसार चिसोबाट बच्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
न्यानो कपडा लागाउने ।
टाउको र हातखुट्टालाई तातो पार्नुपर्छ ।
तोरीको तेलले शरीर तथा हातखुट्टा मालिस गर्ने ।
तातो, पोसिलो तथा झोलिलो खाना खाने ।
चिसोबाट बच्न दुधमा मरिच र बेसार हालेर खाने ।
चिसो लाग्न नदिन अदुवा र विरे नुन हालेर पानी उमालेर पिउने ।
नियमित तातो पानी खाने ।
जाडोको समयमा हातखुट्टा फुस्रो हुन्छ । त्यसैले छालाईलाई फुट्नबाट जोगाउन राती सुत्नु अघि तोरीको तेलले मालिस गर्नुपर्नेजनस्वास्थ्य विज्ञ डा. उप्रतीले बताइन् । जाडोको समयमा चिसोबाट बच्न आगो ताप्ने चलन पनि रहेको छ ।
आगो ताप्दा विषेश त शहरबजार तिर प्लास्टिकको झोलाहरु पनि बालेर आगो ताप्ने गरिन्छ । यसरी आगो ताप्दा हातखुट्टा, अनुहार सुख्खा भएर फुट्ने र स्वास्थ्यमा अन्य असर गर्ने डा. उप्रेतीले बताइन् । ‘प्लास्टिकमा हुने टक्सिन नामक रसायनको कारण स्वास्थ्यमा असर पर्छ । त्यसैले प्लास्टिकको प्रयोग गरेर आगो ताप्न हुदैन । भ्यालढोका बन्द गरेर पनि कोठा भित्र आगो बाल्नु हुदैन ,’ उनले भनिन् ,‘ चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा नै उत्तम हुन्छ ।’
पुस २०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रकाशित मिति २० पुष २०७४, बिहीबार २२:२४
सोलुखुम्बुका एक जनालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि
सोलुखुम्बु दिप्लीघाट बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको १ महिना बित्न नपाउँदै भत्किन थाले
सोलुखुम्बु : लगातारको बर्षापछि ठाउँ ठाउँमा पहिरो, सडक खण्डसमेत केही घण्टा अबरुद्ध
कास्कीमा गएको पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ पुग्यो
सप्तकोशीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय
गिरीलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने समाजवादीको निर्णय
काडमाडौँ स्पोट क्लाइमिङ सेन्टरः साहसिक खेलमा रुषाको अनुभव
पर्यटन मस्यौदा माथि राजधानीमा सरोकारवाला बिच छलफल
खुम्बु पासाङल्हमु गाउपालिकालाई काग्रेस नेता कार्कीको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
प्रकाशक: IBBS Media Pvt.Ltd
प्रबन्ध निर्देशक : गेल्छिरी शेर्पा
सन्चालक / सम्पादक: डाेमा शेर्पा
अतिथि सम्पादक: पेम्बा गेलु शेर्पा यूरोप
सहयोगी सम्पादक: फुर्वा शेर्पा जापान
सोनाम याङजी शेर्पा सोलुखुम्बु
हिमाली भेगका बिबिध गतिविधीलाई समेट्ने प्रयासका साथ आइ बिबि मिडिया ग्रुप प्रालीद्दारा २०१५ मा संचालन गरेको हिमाली संदेश डटकम एक अनलाइन पत्रिका हो ।
बिशेष हिमाली भेगका भाषा, कला, संस्कृती, भेषभुषा, रहनसहन, चालचलन, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी यो अनलाइन समाचार पत्रिका सन्चालन गरिएको हो ।
बौद्द टुसाल, काठमाडाैं
© 2015 - 2020हिमाली संदेश. स्वार्धिकार सुरक्षित